သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလအတွက်အချိန် စတင်. စက်တင်ဘာလ72011 အရှေ့တိုင်း Express ကို - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeအထွေထွေနှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလအတွက်အချိန် စတင်. စက်တင်ဘာလ72011 အရှေ့တိုင်း Express ကို: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင်
07 / 09 / 2019 Levent Elmastaş အထွေထွေ, တူရကီ, ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက် 0
7 စက်တင်ဘာလ 1871 Haydarpasa-အစ္စတန်ဘူလ်ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းလေလံ, ထိုခေါငျးလိုင်းနှင့်လှည်းစေမည်ဖြစ်သောဘယ်လဂျီယံကုမ္ပဏီတခုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
7 စက်တင်ဘာလ 1939 ဥရောပရထားလမ်းအသွားအလာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလအတွက်အချိန်စတင်7စက်တင်ဘာလ 2011 အရှေ့တိုင်း Express,2စက်တင်ဘာလ 2011 ပဲရစ်ကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ orient Express ကိုဗီယင်နာ, ဘူဒါပက်, သိနာ, ဘူခါရက်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ် Sirkeci ရထားဘူတာလမ်းကြောင်း Varna အောက်ပါအားဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလအတွက်အချိန် စတင်. စက်တင်ဘာလ72011 အရှေ့တိုင်း Express ကို: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင် 07 / 09 / 20127စက်တင်ဘာလ 1871 Haydarpasa-အစ္စတန်ဘူလ်ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းလေလံ, ထိုခေါငျးလိုင်းနှင့်လှည်းစေမည်ဖြစ်သောဘယ်လဂျီယံကုမ္ပဏီတခုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။7စက်တင်ဘာလ 1939 ဥရောပရထားလမ်းအသွားအလာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလအတွက်အချိန်စတင်7စက်တင်ဘာလ 2011 အရှေ့တိုင်း Express,2စက်တင်ဘာလ 2011 ပဲရစ်ကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ orient Express ကိုဗီယင်နာ, ဘူဒါပက်, သိနာ, ဘူခါရက်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ် Sirkeci ရထားဘူတာလမ်းကြောင်း Varna အောက်ပါအားဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ72011 အချိန်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစက်တင်ဘာလထဲမှာစတင်သော Orient Express ကို ... 07 / 09 / 2015 သမိုင်းစက်တင်ဘာလ71871 Haydarpasa-အစ္စတန်ဘူလ်ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းလေလံအတွက်ယနေ့ခေါငျးလိုင်းနှင့်လှည်းစေမည်ဖြစ်သောဘယ်လဂျီယံကုမ္ပဏီတခုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။7စက်တင်ဘာလ 1939 ဥရောပရထားလမ်းအသွားအလာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလအတွက်အချိန်စတင်7စက်တင်ဘာလ 2011 အရှေ့တိုင်း Express,2စက်တင်ဘာလ 2011 ပဲရစ်ကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ orient Express ကိုဗီယင်နာ, ဘူဒါပက်, သိနာ, ဘူခါရက်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ် Sirkeci ရထားဘူတာလမ်းကြောင်း Varna အောက်ပါအားဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ72011 လေ့လာရေးခရီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစက်တင်ဘာလထဲမှာစတင် ... 07 / 09 / 2016 သမိုင်းစက်တင်ဘာလ71871 Haydarpasa-အစ္စတန်ဘူလ်ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းလေလံအတွက်ယနေ့ခေါငျးလိုင်းနှင့်လှည်းစေမည်ဖြစ်သောဘယ်လဂျီယံကုမ္ပဏီတခုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။7စက်တင်ဘာလ 1939 ဥရောပရထားလမ်းအသွားအလာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလအတွက်အချိန်စတင်7စက်တင်ဘာလ 2011 အရှေ့တိုင်း Express,2စက်တင်ဘာလ 2011 ပဲရစ်ကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ orient Express ကိုဗီယင်နာ, ဘူဒါပက်, သိနာ, ဘူခါရက်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ် Sirkeci ရထားဘူတာလမ်းကြောင်း Varna အောက်ပါအားဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးအ express ကိုမှအစ္စတန်ဘူလ်ချိတ်ဆက်တစ်ဝက်တစ်ဒါဇင်ဥရောပနိုင်ငံများဖြတ်သန်းပထမဦးဆုံးနှင့်မူရင်း Orient Express ကို, 07 / 11 / 2012 orient Express ကို, ပထမဦးဆုံးနှင့်မူရင်း orient Express ကိုတဝက်တဒါဇင်ဥရောပနိုင်ငံများနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ဖြတ်သန်း, ဆက်သွယ်ထားသောပထမဦးဆုံးအမြန်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပရဲ့ပထမဦးဆုံးဇိမ်ခံအိပ်ရာ express ကို, အစ္စတန်ဘူလ်မှပဲရစ်xnumxyılမှ xnumxil အကြားရထားပြေးဆွဲမှုမရှိ။ ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Wagon-လီ Orient Express, 1883 အတွက် Orient-Express ကိုမူလအမည်ဖြင့်ပဲရစ်ကနေသူ့ရဲ့သမီးကညာကိုခရီးစတင်ခဲ့သည်။ ဒါက Orient Express ကိုပြင်သစ်, ဂျာမန်, သြစတြီးယားနဲ့အော်တိုမန်ခေတ်ဆင်းအရာရှိများနှင့်သံတမန်များဝင်ရောက်ခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်။ ထို့အပြင်တက်ရောက်လာသူများအကြားတစ်ဦးဘုရားဖူးအဆိုပါ Times သတင်းစာသတင်းထောက်နှင့်ဝတ္ထုရေးဆရာ Edmond Aboutd နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ ဒီခရီးစဉ်အကြောင်းကို Edmond De Ponteis အကြောင်း 1977 တစ် Stamboul အမှတ်တရများခုနှစ်တွင် ...
ပထမဦးဆုံးအ express ကိုမှအစ္စတန်ဘူလ်ချိတ်ဆက်တစ်ဝက်တစ်ဒါဇင်ဥရောပနိုင်ငံများဖြတ်သန်းပထမဦးဆုံးနှင့်မူရင်း Orient Express ကို, 07 / 11 / 2012 orient Express ကို, ပထမဦးဆုံးနှင့်မူရင်း orient Express ကိုတဝက်တဒါဇင်ဥရောပနိုင်ငံများနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ဖြတ်သန်း, ဆက်သွယ်ထားသောပထမဦးဆုံးအမြန်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပရဲ့ပထမဦးဆုံးဇိမ်ခံအိပ်ရာ express ကို, အစ္စတန်ဘူလ်မှပဲရစ်xnumxyılမှ xnumxil အကြားရထားပြေးဆွဲမှုမရှိ။ ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Wagon-လီ Orient Express, 1883 အတွက် Orient-Express ကိုမူလအမည်ဖြင့်ပဲရစ်ကနေသူ့ရဲ့သမီးကညာကိုခရီးစတင်ခဲ့သည်။ ဒါက Orient Express ကိုပြင်သစ်, ဂျာမန်, သြစတြီးယားနဲ့အော်တိုမန်ခေတ်ဆင်းအရာရှိများနှင့်သံတမန်များဝင်ရောက်ခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်။ ထို့အပြင်တက်ရောက်လာသူများအကြားတစ်ဦးဘုရားဖူးအဆိုပါ Times သတင်းစာသတင်းထောက်နှင့်ဝတ္ထုရေးဆရာ Edmond Aboutd နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ ဒီခရီးစဉ်အကြောင်းကိုယခုနှစ် 1977 အတွက် Edmond De Ponteis အကြောင်းအမှတ်တရများ ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ72011 လေ့လာရေးခရီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစက်တင်ဘာလထဲမှာစတင် ...
ပထမဦးဆုံးအ express ကိုမှအစ္စတန်ဘူလ်ချိတ်ဆက်တစ်ဝက်တစ်ဒါဇင်ဥရောပနိုင်ငံများဖြတ်သန်းပထမဦးဆုံးနှင့်မူရင်း Orient Express ကို,
ဇွန်လအတွက်ကြီးထွားလာဖို့Beylikdüzü Metrobus လိုင်းအတွက်မတ်လ 2011 သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံအပေါ်စတင်ခြင်း
Ekspress Oriental (Orient Express ကို) သို့ပြန်သွားရန်လာ
ရိုးမား Orient Express ၏ဘာသာရပ်ဖျတ်လတ်သွက်လက်စေပွဲထွက်ခဲ့ပြီးပြီ
Meram Express ကိုအတော်လေးသို့ပြီးခဲ့သည့်တောင်တက်